Qaababka Garka - Talooyinka Fashion -ka ee Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | | La xiiray, Daryeelka shaqsiyeed, fashion, Isbeddellada
Sida laga soo xigtay sahannada dumarku waxay doorbidaan ragga gadhka leh ka horreeya rag xiiray. Kaliya waa inaad fiirisaa inay jiraan mowjad weyn oo rag ah oo wejiyadooda ay ka buuxaan gadhyo leh qaabab iyo qaabab kasta, gaaban ama buuxa, waana sababta oo ah hadda wuxuu dejiyaa isbeddellada jirka ragga.
Ma waxaad ka mid tahay kuwa jecel gadhka? Waa hagaag nasiib baad leedahay, mar haddii dumarku raggaan u arkaan dad leh xirfadaha taranka iyo caafimaad wanaagsan. Haddii aad ku fikireyso inaad timo ka tagto, waxaan sidoo kale ku siin karnaa qaababka gadhka ee ugu fiican oo ku sasabi kara iyadoo ku xiran wejigaaga.
1 Hababka gadhka iyo fasalada
1.1 Garka buuxa
1.2 Garka qaabka Chevron
1.3 Bear ama Hipster Beard
1.4 Gadhka style Padlock
1.5 Wuu turunturooday
1.6 Gadhka qaabka Bandholz
1.7 Qaabka Van Dyke
2 Sida garka loo xidho hadba qaabka wejiga
Hababka gadhka iyo fasalada
Marka xigta, waxaan si faahfaahsan u qeexnaa gadhka inta badan calaamadiya qaabkaaga iyadoo ku xiran muuqaalkaaga. Dabcan, mid walba wuxuu ku xirnaan doonaa fqaabka wejiga iyo shakhsiyadda qof walba. Waxaan ka heli karnaa saddexda maalmood ee caadiga ah ilaa gadhka aadka u cufan ee u muuqda inaysan dhammaad lahayn.
Waa kan ugu dabiiciga ah, qadiimiga ah oo aan lahayn qaban -qaabin dheeraad ah marka loo eego goynta goonida ah ee aad u baahan karto. Si aad awood ugu yeelatid inaad gadhkaan ku xirato xarrago iyo wax dheer, waa inaad qaadataa daryeel taxane ah oo aad akhrin karto qaybteenna. Ma laha qarsoodi weyn oo ku saabsan sida loo xidho, Kaliya waa inaad u oggolaataa inay ku korto dhammaan geesaha wejigaaga oo aad sugto cufnaanta ay ku siineyso.
Garka qaabka Chevron
Qaabkani wuxuu u yimaadaa si aad u calaamadsan waxaana kaliya loogu talagalay ragga jecel inay calaamadiyaan qaabkooda leh dabeecad bisil oo weyn. Waxay ka kooban tahay in shaarubahu waaweyn oo qaro weyn leh dhinacyada iyo gadhka intiisa kale waa in la gooyaa, sidii haddii ay ahayd saddex maalmood. Isbarbardhigiisu waa mid cajiib ah oo waa in lagu xidhaa timo timo ilaa ugu dambaysa.
Buuxo, gadhka qaabka Chevron-ka
Bear ama Hipster Beard
Garka noocan ahi waa sidoo kale loo yaqaan 'Garibaldi'. Ku habboon oo aad u sasabanaya rag badan, iyo dhammaan kuwa aan doonayn inay sameeyaan daryeel badan iyo gebi ahaanba iska daa. Dad badan waxay u noqon doontaa xirfad aad u weyn maadaama laga yaabo inay u baahan tahay daryeel iyo dulqaad badan. Laakiin kuwa kale waxay u noqon kartaa qayb kale oo jirkooda ka mid ah oo ay tahay in la hagaajiyo waqti ka waqti labadaba shaaribkooda iyo dhererkiisa labadaba.
Gadhka style Padlock
Waa garkii ku hadhay qaab riyo ah. Waxay u baahan tahay daryeel maalinle ah iyada oo la kaashanayo mandiil weyn ama gooye, waa la tilmaami doonaa ilaa aad ka rabto muuqaalka la rabo, oo aan marna ka bixin qaabka. Waxay ka kooban tahay in timuhu u koraan afka agtiisa si loo mideeyo oo kaliya riyaha iyo shaarubaha oo aan loo oggolaan in wax timo ahi ka soo baxaan dhabannada iyo dhabannada.
Waa kan ugu dabiiciga ah kan ugu sharadka badan dhammaan wejiyada. Oo waa u fududdahay in gadhkaagu u koro hal maalin oo kaliya, si had iyo jeer loogu hayo dherer isku mid ah. Ma laha wax qarsoon oo dheeri ah, maadaama ay tahay inaad u oggolaato inay ku korto halka ay si dabiici ah ugu koraan. Makiinad ayaa kaa caawin doonta inaad xiirto gadhkaaga marka loo baahdo.
Gadhka qaabka Padlock iyo gadh saddex maalmood ah
Gadhka qaabka Bandholz
Waa hab kale oo loo xidho weji aad u timo badan, iyada oo aan la jarin ama wax laga beddelin si loo abuuro qaabka Bandholz, oo uu hindisay hal -abuurkiisa Eric Bandholz. Maxaa gadhkaan u gaar ah? Waa qaab -dhismeedkiisa oo dheer oo ay ku badan yihiin shaarub weyn, weyn, shaarub aad u bakhtiyay ayaa la duuduubay, labada dhinacba.
Qaabka Van Dyke
Waxay ka qaadanaysaa qaab -dhismeedkeeda qaabkii uu siiyay rinjiile Anthony Van Dyke. Waxay leedahay muuqaal la mid ah qaabka qufulka, kaliya Aragtida Riyaha iyo gadhka gebi ahaanba dhinacyada ayaa laga xiiray, taas oo ah, dhabannada iyo daamanka. Waa qaab caadi ah, laakiin isla markaa xarrago leh.
Gaadhka qaabka Bandholz iyo qaabka Van Dyke
Sida garka loo xidho hadba qaabka wejiga
Shaki kuma jiro waxaa jira wajiyo galiya ku dhawaad ​​nooc kasta oo gadh ah, laakiin kuwa kale waa in la gooyaa oo la qaabeeyaa si sax ah, iyadoo ku xiran qaabka wejiga. Wajiyaal oval ficil ahaan dhammaan noocyada gadhka waa la oggol yahay. Waxaad dooran kartaa qaab waxaadna isku dayi kartaa inaysan u ekaan weji wareegsan, haddii ay sidaas tahay, waa inaad ka saar mugga dhincyada oo sii daa aagga garka.
Wajiyo dhaadheer waa inaad raadisaa summatoor, waa inaad ballaarisaa dhinacyada, ka tagista gubashada dhinaceeda oo aad u dhumuc weyn iyo aagga garka oo aad uga gaaban. Wajiyo wareegsan wuxuu sharad ku geli doonaa xiirashada dhinacyada wajiga, taas oo ah, qeybta dhabannada, wuxuuna siin doonaa muuqaal dheer oo dheer, isagoo ka tegaya waxoogaa riyo ah.
On wajiyo square waa inaad ka tagtaa timo aad u badan qaybta dhexe ee garka oo aad hoos u dhigto dhinacyada. Kuwaas wejiyo qaabeeya saddex geesood waa inaad ka dhigtaa astaamaha mid jilicsan oo tanna waa ikhtiyaar wanaagsan gadh buuxa xidho, had iyo jeer leh weji wanaagsan. Xulashada mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka ayaa ka badan intii loo adeegay, haddii aad weli shaki ka qabto oo aad rabto inaad ogaato haddii ay lagama maarmaan tahay inaad gadhka xidhato iyo haddii kale, waxaad naga akhrin kartaa xidhiidhkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Hababka gadhka